ငါ Ubuntu 20.04 LTS ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့ပြီး Steam နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများပျောက်ကွယ်သွားသည် Linux မှ
ဣဇာက်သည် | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ, အားကစားပြိုင်ပွဲ
ရောက်ပြီ Ubuntu ကို 20.04 LTS, Canonical ဖြန့်ဖြူး၏အလားအလာသစ်ကိုဗားရှင်း။ ယခုအသစ်ဖြန့်ချိမှုအသစ်သည်အသစ်အဆန်းများအားလုံးကိုကြိုးစားကြည့်ရှုသူများထံမှကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအနည်းငယ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာဒီပစ်လွှတ်ကိုကြေငြာပြီးပါပြီ။
အကယ်၍ သင် Ubuntu 18.04 LTS သို့မဟုတ် Ubuntu 19.10 အသုံးပြုသူများဖြစ်လျှင်သင်၏ distro version အသစ်ကို update လုပ်ရန်စဉ်းစားဖွယ်ရှိသည်။ Ubuntu update system မှ command များအပြင် graphical mode တွင် update လုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ပြုပြီးပြီဆိုလျှင်၊ Valve ၏ Steam သုံးစွဲသူနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းအချို့အသစ်ပြုပြင်ခြင်းပြီးနောက်သင်မနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့ဖွယ်ရှိသည်။
Update ကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့် system ပြန်လည်စတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင် Ubuntu 20.04 ယူဆောင်လာသည့်သတင်းကိုသင်စလေ့လာနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် application launcher သို့မဟုတ် menus များမှတဆင့် "လမ်းလျှောက်" လျှင်သင်မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိသည် ဘာ ရေနွေးငွေ့နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းအိုင်ကွန်များပျောက်ကွယ်သွားပြီ ဒီ client ကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စိတ်မပူပါနဲ့! ၎င်းတွင်အလွန်လွယ်ကူသောဖြေရှင်းချက်ရှိပြီးသင်မည်သည့်အရာမျှဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။
သင်လုပ်ရမှာကတော့ ဒီအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ အရာအားလုံးပုံမှန်ပြန်ရောက်လာအောင်
Ubuntu Software အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုသုံးပြီး Steam Client ကိုရှာပါ။
၎င်းကိုနှိပ်ပြီးနောက် Install ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အခုသင်၌၎င်းကိုရရှိနိုင်ပြီဆိုတာကိုသင်တွေ့ပြီ။ အကယ်၍ ၎င်းကိုသင်္ဘောကျင်းတွင်ကျောက်ချရပ်နားထားပါက၎င်းသည်ထိုနေရာတွင်ထပ်မံရောက်ရှိနေကြောင်းနှင့်သင် login အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းစရာမလိုတော့ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် စစ်ဆေးခြင်း သင်၏ Steam session သည်နဂိုအတိုင်းရှိနေသည်၊ သင်၏ဂိမ်းစာကြည့်တိုက်သည်အတူတူဖြစ်သည်၊ ပျောက်ကွယ်သွားသောဗွီဒီယိုဂိမ်းများသည်ပြန်ပေါ်လာပြီးသင်ဖွင့်နိုင်သည် (၎င်းတို့သည်သိမ်းဆည်းထားသောဂိမ်းများအားလုံးစသည်ဖြင့်) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Ubuntu 20.04 LTS သို့ အဆင့်မြှင့်ပြီး Steam နှင့် ဗီဒီယိုဂိမ်းများ ပျောက်သွားပါသည်။
နားမလည်ပါ။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည် Steam application ကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားပါသည်။
သို့မဟုတ်ရုံ launchers ဖယ်ရှား ??
ငါမှတ်စုကိုစတင်ဖတ်ရှုသောအခါ 'menulibre' ကိုသိမ်းဆည်းပြီး Steam ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်သည့် configuration file နှင့်သက်ဆိုင်သောပြန်လည်နာလန်ထမှုအချို့မျှော်လင့်ခဲ့သည်။
ဟုတ်ကဲ့, Launchers update တဲ့အခါပျောက်ကွယ်သွားသည်။ နှင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းအသုံးပြုသူများအဘို့, စသည်တို့ကိုအရာရာပုံမှန်ပြန်သွားနှင့်ဂိမ်းစာကြည့်တိုက်, ပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်အရိုးရှင်းဆုံး, အမြန်ဆုံးနှင့်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် menulibre ကိုသုံးပါ? အဲဒီအတွက်မီနူးအယ်ဒီတာကို install လုပ်မလား။ ငါထင်တာကတော့ဒီဖြေရှင်းချက်ဟာအသုံးပြုသူအများစုကိုအကောင်းဆုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ အဲဒါကပိုမိုရိုးရှင်းပြီးအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းချက်များကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
အမှန်တရားကတော့ Linux နဲ့ကစားဖို့ဟန်ဆောင်ဟန်ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ Linux အတွက် Graphic Solutions တွေရှိပေမယ့် NVidia ကသူ့ရဲ့ code အချို့ကို dropwise ဖြန့်ချိနေပြီးတစ်ခုခုအမြဲတမ်းပျောက်နေမှာပါ။ ကစားရန်ဆိုလျှင် ၁၀၀% multimedia system ဖြစ်သော Windows ကိုသာသုံးပါ။ Linux သည်အခြားအမျိုးအစားတစ်ခုအတွက် lunux တွင်ကစားရန်ဟန်ဆောင်သည်။ စနစ်သည် crash နှင့်မတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သငျသညျ play လျှင်, Windows ကိုသုံးပါ။ Linux ကိုအခြားစနစ်တစ်ခုနှင့်မျှဝေခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ပင်၊ သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့် Linux နှင့် ၀ င်းဒိုးကိုသင်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုအရစတင်သုံးစွဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းသည်အသုံးချပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ် emulators များတပ်ဆင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည် (play on linux, wine) ဝင်းဒိုးအတွက်အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုဖွင့ ်၍ တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယခုအချိန်တွင်ထိုသို့ဖြစ်ပါသည်။
အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့၌အချိန်မရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်ကစားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် Windows ကိုလုံး ၀ တပ်ဆင်လိုခြင်းမရှိကြောင်းထင်ရှားပါသည်။ ထိုအဘို့ multiboot လျော့နည်း။ Linux ကစားကွင်းသည်အပြောင်းအလဲများစွာပြောင်းလဲခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဖြစ်ပွားခဲ့သောအရာနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ Linux အတွက်ခေါင်းစဉ်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောခေါင်းစဉ်များနှင့်အခြားရင်းမြစ်မဟုတ်သောဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုပြုလုပ်သည့် Steam's Proton ကဲ့သို့သောဖြေရှင်းနည်းများသည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မှမည်သည့်အသုံးအနှုန်းမှမသုံးဘဲနှင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Steam ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားဆော့ဖ်ဝဲများထက်စနစ်ကိုမတည်ငြိမ်စေပါ။ ကစားခြင်းသည်အခြားလှုပ်ရှားမှုများထက်မတည်ငြိမ်မှုကိုဆိုလိုသည့်အရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသောဆော့ (ဖ်) ဝဲအမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သင်မှတ်ချက်ပေးသည့် Wine, Play On Linux စသည်ဖြင့်ရွေးချယ်စရာများသာရှိသည်။ Steam, GOG, Humble စသည်ဖြင့်လေ့လာသင့်ပြီး Linux အတွက်ဇာတိဗီဒီယိုဂိမ်းမည်မျှရှိသည်ကိုကြည့်သင့်သည်။
Windows သည် Linux နှင့်အခြား system များထက် "multimedia" မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သိသည်အတိုင်း Linux ၌ရုပ်ပုံများကိုမြင်နိုင်သည်၊ အသံဖွင့်နိုင်သည်၊ ဗွီဒီယိုကြည့်ခြင်း၊ အဲဒီအတွက် Windows ကိုသုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။
နောက်ဆုံး GPU driver ... ငါမှာတိုင်ကြားချက်မရှိဘူး။ ငါ AMDGPU ကိုသုံးပြီးငါကောင်းတယ်၊ မကောင်းဘူးဆိုရင် NVIDIA (သို့) AMD ပိုင်ရှင်များကိုသုံးနိုင်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်၊ နှစ်နှစ်လောက်က GNU / Linux ကိုဖော်ပြနေပုံရတယ်။
ဟုတ်ကဲ့၊ Isaac ဇာက်၊ ဂိမ်းကစားသူများကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲသွားပြီ၊ ဒါပေမယ့် Linux မှာမူပြောင်းလဲမှုမရှိသေးဘူး။ multiboot ရှိတာဘာမှထိခိုက်စရာမရှိဘူး၊ ငါမှာဒရာမာလည်းမရှိဘူး။ ကံမကောင်းစွာပဲဒီနေ့ငါအတွက်အကောင်းဆုံးအရာက multiboot ဖြစ်တယ်။ ငါပြောပြီးငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကနေအကြံပြုတာဖြစ်တယ်။
ငါမှာဂိမ်းတွေအတွက် windows တွေတပ်ဆင်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် linux မှာလည်းရေနွေးငွေ့နဲ့ linux အတွက်ဇာတိဂိမ်းတွေမှာပြproblemsနာမရှိဘူး။
ဥပမာ WarThunder ကိုသင်စမ်းကြည့်ဖူးလား။ ငါပြproblemsနာမရှိဘဲ linux ပေါ်မှာကစား။
developer များအနေဖြင့် warthunder ကဲ့သို့သော Linux အတွက်မူကွဲတစ်ခုကိုထုတ်ပေးရုံသာမက Linux ရှိဂိမ်းများကိုခံစားရန်ဖြစ်သည်။
ပြနာက linux ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲ developer များမှာစျေးကွက်ဝေစုနည်းသောကြောင့်နောက်ခံတွင်ရှိသည်။ ကံကောင်းချင်တော့သူတို့အားလုံးမဟုတ်ပါ။
Unity ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်အားကောင်းစွာဝန်မတင်သောဂရန်း မှလွဲ၍ (သူသည်အဘွား၏ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုကိုပြသခြင်းမပြုဘဲမီနူးတွင်ချိတ်နေသည်)
sudo ubuntu-drivers အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းပါ
NVidia GForce 52m board နဲ့အတူ Asus K310J မှတ်စုစာအုပ်ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသည်။
စက်အဟောင်း, ဒါပေမယ့် Xubuntu နှင့်အတူကကြီးမြတ် !!!
Danilo Quispe Lucana ဟုသူကပြောသည်
သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် Store မှ Steam ကိုအရင် install လုပ်ပြီးယခင် repository မှ Steam ကို install လုပ်ပါက Snap version သည်ယခု install လုပ်မည်မဟုတ်လော ငါ APT နှင့်ထပ်မံတပ်ဆင်ပါကအတူတူပင်အလုပ်လုပ်ပါ့မလား
Danilo Quispe Lucana အားပြန်ပြောပါ